11kii Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa Wareega Hore Ee Group-yada Koobka Euro 2012. - jornalizem
11kii Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa Wareega Hore Ee Group-yada Koobka Euro 2012.
Ka dib markii uu soo dhamaaday wareega hore ee Group-yada Euro 2012, waxaan baahin doonaa 11ka ciyaaryahan ee ay inala tahay inay si fiican uga dhex muuqdeen xulalkooda.
Wareega kasta oo soo dhamaada waxaan idiin soo gudbin doonaa 11ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa wareegaas, waxaana ku bilaabi doonaa sideedii kulan ee ugu horeysay Euro 2012, iyadoo ciyaartoyda la soo xulay ay ka socdaan sagaal wadan.
Waxaa liiska ku jira ciyaaryahano waayo arag ah sida Pirlo iyo Shevchenko, ciyaartoy soo baxeysaa Dzagoev iyo Hummels; xiddigo haatan muuqda Sneijder iyo Iniesta.
Goolhaye – Gianluigi Buffon (Italy)� – Buffon ayaa xilli ciyaareedyadii ugu danbeeyay dhaawacyo darted ka dhacsanaa in lagu soo darro ka hadlida goolhayayaasha ugu fiican adduunka. Lakiin waxa uu ismuujiyay mar kale kulankii Azzurri ay la yeelatay Spain, isagoo qeyb libaax leh ka qaatay barbarihii ay ka heleen xulka difaacanaya Euro 2012. 15 sanno ayuu u ciyaarayaa xulka Italy welina da’diisu waa 34 jir.
Daafac Midig – Mathieu Debuchy (France) – Inkastoo ay u aheyd tartankiisii ugu horeeyay ee uu u ciyaaro France hadanaa Debuchy waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u sareeya kulankii England. Waxa uu ku fiicnaa weerar qaadida waxaana uu kubada halis ah ka keenayay dhanka midig isagoo sidoo kalena si fiican u difaacday.
Daafac Dhexe – Mats Hummels (Germany) – Guushii ay Jarmalka ka gaareen Portugal, Hummels waxa ay uu ahaa wadnaha daafaca Germany ee aamusiyay Portugal. Cristiano Ronaldo iyo asxaabtiisa waxa ay mari waayeen Hummels iyo daafacyadiisa kale Philipp Lahm, Holger Badstuber iyo Jerome Boateng.
Daafac Dhexe- Simon Kjaer (Denmark) – Isaga iyo daafaca kale Daniel Agger waxa ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u sareeya kulankii ay ka badiyeen Netherlands, taasoo aheyd natiijo lama filaan ah. Kjaer ooh ore loogu eedeyn jiray inuu ku xun yahay boos qaadashada ayaa garoonka Kharkiv ku soo bandhigay inaysan taasi waxba ka jirin. Daafac Bidix – Simon Poulsen (Denmark) - Xurentii uu xureystay garabka bidix ayaa keentay goolkii Michael Krohn-Dehli ee guusha ahaa. 27 jirkaan daafaca ah ayaa si fiican u raacayay Arjen Robben.